Ithebhulethi eDlwengileyo yokuBumba abaCwangcisi bezoBugcisa
Ukukhetha iWindows Graphics Tablet
Isilinganisi ishati echaza iinkcukacha zeentlobo zeefayile eziphezulu kunye nemifanekiso yokudweba, ngelilungu elikhethekileyo kwiimfuno zabaqulunqi kunye nabaculi. Copyright Angela D. Mitchell, About.com
Xa kuziwa ekuqulunqeni ubugcisa, ukwenza iifayile yefayile ebonakalayo inokuba yinto enamandla. Kodwa ukukhetha nje okulungileyo kuya kuthetha ukuvavanya iinkalo ezinjengeengcinezelo zengcinezelo, ukuqaphela ukutshintsha, isisombululo, kunye nobukhulu bommandla wendawo yomsebenzi ('indawo yokudweba' kwisikrini).
Ukukunika uhlolo olusondeleyo lweempawu, ixabiso kunye neentlukwano phakathi kwamanqaku amaninzi ephathekayo ephathekayo, ndidibanisa ishati efanelekileyo kule khasi.
Iingenelelo zeethebhulethi zeGraphics
Ukuvela kweemifanekiso (okanye "ukudweba") kwitheyibhile kwiminyaka emininzi edlulileyo uye wavula umhlaba omtsha wezobugcisa kunye nabaqulunqi, ekugqibeleni ubapha indlela yokwenza umdwebo, ukudweba nokupenda ngaphandle kokuxhamla kwemouse, kwindawo ukuxelisa ukusebenzisa ipeni (okanye ibrashi) kunye nephepha.
Kubabenzi, iipilisi zemifanekiso zivula indawo yokusebenzela ngendlela enhle neyendalo. Ngokukhawuleza, awuyikuqhawula imouse - unako ukubambelela phantsi kwipeni, usebenze ngokwemvelo kwi desktop, itafile, okanye kwipuphu yakho.
Iipilisi zemibala eziqhelekileyo ziquka indawo yendawo yokuhlala (iphepha lekhompyutheni), ipeni okanye ipolisi, kunye neentlobo ezikhethiweyo okanye iifowuni ezenziwe ngokwezifiso. Nangona ezinye zibonelela ngamagunya okuchaphazelekayo, iipilisi zemiGrafti ngokuqhelekileyo zininzi malunga 'nokudweba' kwaye zingaphantsi malunga nefuthe okanye iinkalo zekhibhodi ezingenasiphelo zendalo ezininzi. Nangona kunjalo, okukhethwa kwinqununu kungabangela ukuba ube nolwazi olungcono kunye nolwazi lwe-ergonomic.
I-asethi enkulu enye enye enikezwa yi-tablet yemifanekiso, nangona kunjalo, icacile ngokuchanekileyo. Kukho izinto onokuzenza kunye nefayile ephathekayo ephathekayo eya kuba yinto enzima okanye engenakwenzeka kwimouse. Imouse iquka ukuhamba kwesandla sakho sonke kwisimo esingaqhelekanga; i-tablet yemifanekiso ivumela ukuba ungabambeli kakuhle ipeni uze usebenze ngeendlela ezincinci ezintle.
Kulabo abathanda ukwenza uninzi lwe-photo retouching okanye i-airbrushing, ukuchaneka kwepilisi yemifanekiso kukuvumela ukujongana neempawu ezimnyama kunye neenkcukacha eziza kuba nzima ukuzenza nge mouse. Ukusebenzisa ipeni yokudweba kukukunceda ukuba udwebe imigqa edeleyo, enamandla, endaweni yokumisa kwaye uqale ngenxa yokuba uphumelele kwindawo ye mousepad.
Iipilisi zemibala zingabanamacingo, okanye zixhunyiwe (ngokuqhelekileyo nge-USB), kwaye ziquka izinto ezimbalwa ezisisiseko: ithebhulethi ngokwayo, ipeni (okanye ipenethi), i-substitution nibs (ipeneni), isofthiwe yokufaka, ipenisi okanye ipeni yokuma, kunye isikhokelo semveliso. Abanye baquka rhoqo imouse.
Ezinye iipilisi zokudweba zithatha isidingo sokulandelelana kwi-akhawunti (kubaluleke ngakumbi kubayilayi), kubandakanywa ishidi elifihlakeleyo okanye lifakwe phezu komhlaba. Le yinto yam endiyithandayo yokusebenza ngefayile yegrafu-ngokuvumela umsebenzisi ukuba adibanise kwisithombe, ukudweba okanye omnye umfanekiso phantsi kobala, ngoku ungayilandela ngqo umfanekiso kwikhompyuter yakho ukuze uqhube ngakumbi okanye uhlele.
Ukusebenza kunye neBrands
I-Cintiq yipilisi ephezulu yokusebenzela, kodwa zonke iifayile ze-tablet zeWacom zineendlela ezihlukeneyo zokugqwesa, kwaye zenziwa ngabo bonke abakwi-designers engqondweni. Ngokunyanisekileyo kweWacom
Iinjongo zokuSebenza zokuCamngca
Xa ukhangela i-tablet yemifanekiso ekulungeleyo, khumbula ukuba i-tablet enkulu enkulu yefribhethi ayikwazi ukuba yinto ekhethileyo. Baye benza imisebenzi emininzi, kodwa banokhathaza ukuba unesidiski esinobukhulu okanye obunzima. Njalo uqwalasele ukuba ithebhulethi ngokwayo iya kuba yinto enkulu kunommandla 'osebenzayo,' owenza nje indawo yendawo yokudweba yedwa. Nangona kunjalo, ukuba ungumntu osebenza kunye neemplates kwiimveliso zakho, qiniseka ukuba ukhetha i-tablet yegrafu apho indawo yomsebenzi inkulu ngokwaneleyo ukuba ibenze.
Uvakalelo lweengcinezelo ngokuqhelekileyo luqala ukusuka kwi-1024 ukuya ku-2048, kwaye ngokusisiseko, malunga nokuba ithempiliti yakho okanye 'iphepha' lijongene nengcinezelo yecenki xa udweba. Unxinzelelo oluninzi luya kubangela utshintsho kwisisindo sokuxubha okanye ubunzima bakho, ngelixa ubuncinci buya kubangela ukukhanya. Ukuphakamisa ukuvavanya kwengcinezelo, ngokuqhelekileyo ipeneni iya kuziva - iphumela kwinkqubo ecacileyo kunye neyobuchule, ebonakalayo.
Iipilisi ezincinci eziphendulayo zenza imidwebo enokuthi ibe ne "jagged". Zingaba zilungele ukukhishina i-signature yakho okanye mhlawumbi ngokukhawuleza iqhinga elilula, kodwa baya kuba luncedo kunabo bafuna ukudala ubugcisa bokwenene.
Ubume bovakalelwa ngenye into ebalulekileyo yokuqwalasela. Iipilisi ezintle zibonelela ngomhlaba onomlinganiselo ofanelekileyo wokungqubuzana kunye nokuchasene, okubangela ukuba uvakalelwa kukuba 'kufana nephepha' ngelixa ukhangisa okanye usebenza.
Ukuqaphela ukuqwalasela ngenye impawu ebalulekileyo kubayila kunye nabaculi, kwaye ngokuqhelekileyo kufumaneka kuphela kwiiphilisi zeemifanekiso eziphezulu, kodwa kukho izinto ezimbalwa ezifana namanqaku ambalwa afikelelekayo aManhattan kunye neAiptek aquka ukubaluleka kokuqaphela. Ukuqaphela ukujongwa, ngokuqhelekileyo kufumaneka kwi-plus okanye ngaphantsi kwama-degree degrees of inclination, ngokuyisiseko ikuvumela ukuba ulingise utshintsho 'kumgca' oya kusola ngokuxhomekeka kwintsimbi yakho, ibhrashi okanye i-airbrush, njengoko kwakuza kwenzeka ngeenguqu .
Iibhodi zeMifanekiso zeMifanekiso
Umgca we-Wacom wesitayela weetrafti ubeka umgangatho wegolide weemodeli, kwaye zivakaliswa ngokufanelekileyo ngabaqulunqi ngesizathu. Amacwecwe aphendulayo, ayenzelwe kakuhle, amaninzi anikezela ubuzwe obunzulu, kunye neepentiki zabo zepentiki azikho amandla okubhebhethekisa ibhetri, ezinokuthi zenze umehluko wangempela kwimpendulo kunye nemisebenzi yengcaciso. I-Cintiq yipilisi ephezulu yokusebenzela, kodwa zonke iifayile ze-tablet zeWacom zineendlela ezihlukeneyo zokugqwesa, kwaye zenziwa ngabo bonke abakwi-designers engqondweni.
Ezinye iimpawu ezidumileyo ziquka i-Aiptek ekhankanyiweyo ngaphambili, eyenza izinto ezithandekayo (kunye nemodeli yayo enobungakanani, kuquka neefenethi-free, ezifana neWacom), kunye nezinye iindlela zokukhetha ulwabiwo-mali njengeMonoprice kunye neGeneus eyenziwe abafundi, kunye neempawu ezifana neManhattan okanye iHanvon (omnye umniki-mpahla ophezulu).
I-Box Box Office Software Solutions
Uluhlu lokuKhanya kunye neNgcaciso yokuCoca
Iingundoqo zoxinzelelo lwaMoya
IYunivesithi yaseDetroit I-Admitted Admissions
Scientific Method I-Word Search
Ayikho ixesha leTe? Unokuthi mhlawumbi udlala igalofu ... Emva kokulinda
Iimpawu ezigxininisayo - Ulwabiwo olunamandla